फिल्म राजा हिन्दुस्तानी रिलीज भएको २४ बर्ष पछी थाहा भयो यस्तो पर्दा पछाडीको वास्तविक कुरा!! – News Nepali Dainik
फिल्म राजा हिन्दुस्तानी रिलीज भएको २४ बर्ष पछी थाहा भयो यस्तो पर्दा पछाडीको वास्तविक कुरा!!
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १९, २०७७ समय: १६:५७:०८
***राजा हिन्दुस्तानी फिल्म रिलीज भएको २४ बर्ष पूरा भएको छ । यो फिल्ममा चर्चित करिश्मा कपूरको दमदार अभिनय सबैलाई थाहा नै छ । फिल्म १९९६ मा रिलीज भएको थियो । यस** फिल्ममा, करिश्माले आमिर खानसँग एक जबरदस्त र बोल्ड दृश्य दिएकी थिइन् । यस दृश्यले त्यस समयमा मिडियाहरुमा धेरै शीर्षकहरू बनायो। त्यस समयमा करिश्माले यो दृश्य गर्न निक्कै साहसपूर्वक निर्णय लिनुपरेको थियो । उनले यस दृश्यसँग सम्बन्धित एक** घटना भएको अहिले आएर खुलाएकी छिन् ।
मलाई भन्न दिनुहोस् कि यो फिल्म एक ब्लकबस्टर थियो। यद्यपि यस फिल्म पछि करिश्मा र आमिर खान कुनै पनि फिल्ममासँगै देखा परेनन्। त्यसको कारण अझै खुलेको छैन ।** तर त्यो बेलाको खास कुरा खुलासा भएको छ । फिल्म ४ घण्टा २४ मिनेट थियो । तर यसलाई सम्पादन गरिसक्दा २ घण्टा ५४ मिनेटको भयो । करिश्माले पनि यस फिल्मको लागि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीको फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त गरेकी छिन् । एक अन्तर्वार्तामा, **करिश्माले फिल्मसँग सम्बन्धित केहि चाखलाग्दा कुरा खुलाएकी छिन् ।
करिश्माले अन्तर्वार्तामा भनेकी थिईन् राजा हिन्दुस्तानीको बारेमा धेरै **सम्झनाहरू छन् तर जब यो फिल्म आयो, म्वाई खानुपर्ने सिनका बारेमा धेरै चर्चा भयो। तर तिनीहरूलाई थाहा छैन यो दृश्य शूट गर्न हामीलाई तीन दिन लागेको थियो । उनले भनिन् म सोचिरहेकी थिएँ कि कहिले यो म्वाई खानुपर्ने दृश्य अन्त हुन्छ। किनकि दृश्य खिच्ने समय फेब्रुअरीको महिना थियो । त्यो बेला धेरै चिसो थियो । यो दृश्य साँझ ६ बजे शूट गरिएको थियो। र जाडोको कारण म काँपिरहेकी **थिए ।
यहाँलाई जानकारी गराऔँ सन् १९९६ को ब्लकबस्टर फिल्म राजा** हिन्दुस्तानीमा करिस्मा कपुर मुख्य अभिनेत्रीका लागि निर्देशकको पहिलो विकल्प थिइनन्। धर्मेश दर्शनले यस फिल्ममा ऐश्वर्या राईलाई प्रस्ताव गरिसकेका थिए। तर त्यो समयमा ऐश्वर्याले अभिनयमा यो फिल्मले क्यारियर बनाउने कि नबनाउने, गर्ने की नगर्ने भनेर निर्णय** गर्न सकेकी थिइनन् । त्यसैले उनले इन्कार गरिन। त्यो इन्कार करिनाका लागि भने राम्रो सावित भयो । त्यसपछि करिनालाई जूही चावलाको प्रस्ताव आयो। तर ती दिनहरूमा आमिर खानसँग जुहीको बारेमा केही कुराको लागि झगडा भयो । त्यसैले उनले फिल्म अस्वीकार गरिन् ।
यस पछि, निर्देशकले पूजा भट्टलाई लिने विचार गरे तर आमिरले निर्देशकलाई अर्की अभिनेत्री लिन भने । अमिर फिल्म तेरे इश्क में नहींंगेमा मातिएको देखाए। आमिर खानले गीतमा वास्तविक भावना ल्याउन एक लिटर मापसे गरेको अहिलेपनि उल्लेख गरिन्छ । फिल्म तेरे इश्क में नहीं गीतमा आमिर पुरा झुमेको देखाइएको छ। आमिर खानले यो गीतलाई वास्तविक महसुस गराउन एक लिटर भोड्का पिएका थिए ।
आमिर खान फिल्म राजा हिन्दुस्तानी मा पनि काम गर्न तयार थिएनन्। तर निर्देशकले उनलाई भने कि यो फिल्म व्यावसायिक हिसाबले राम्रो हुनेछ। यस फिल्ममा आमिर–करिश्माको **म्वाई खाएको दृश्यलाई बलिउड फिल्मको सबैभन्दा लामो म्वाई खाएको दृश्य मानिन्छ। निर्देशक यो दृश्य शूटिंग अघि चिन्तित थिए। तिनीहरू चाहन्थे कि सीन सबैले हेर्न नमिल्ने खालको देखा पर्न नपरोस्। त्यसैले यो दृश्य कम संगीतमा कुनै ड्रामा बिना शूट गरिएको थियो।
यस फिल्ममा करिश्मा कपूरलाई अभिनयका *साथै उनको करियर नै बदलावको लागि पनि चिनिन्छ। करिश्माले पनि यस फिल्मको लागि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीको पुरस्कार प्राप्त गरेपछि यो कुरा स्वीकार गर्छिन् । करिश्मा कपूरलाई अभिनयका साथै यस फिल्ममा उनको मेकओभरका लागि दुनियाँले नोटिश गरेका छन् ।
फिल्म रिलिज भएको २४ बर्ष पूरा भएपछि फिल्मका निर्देशक धर्मेशले आफ्नो दृश्यसँग सम्बन्धित कुरा बताएका छन। निर्देशकले भने कि उनले यो दृश्य लामो समयसम्म लुकाएका थिए । उनले निर्माताको **आदेशमा त्यसो गरे किनकि निर्माताहरूले सेन्सर बोर्डले दृश्यमा कैंची लगाउछन् की भन्ने त्रासमा थिए । यसैले रिलिज गर्नका लागि सेन्सर बोर्डमा पेस गर्ने समय मात्र यो दृष्य थपियो । तर जे होस्, सेन्सर बोर्डले यो फिल्मलाईपनि यू प्रमाणपत्र दियो । निक्कै कमाएको** फिल्म बन्न पुथ्यो ।
Last Updated on: February 1st, 2021 at 4:57 pm
८४६ पटक हेरिएको